10 Kasị Mma Coastal Towns Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Kasị Mma Coastal Towns Na Europe
Na Atlantic Ocean na otu akụkụ na ihe ndị kasị mma obodo na ndị ọzọ, na 10 kasị mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe bụ ndị kasị mma ebe maka a izu ike na-agaghị echefu echefu ezumike. Na-ezu ike n'elu ugwu, ige ntị n’oké osimiri, tnyere n'ime mmiri mmiri na-enweghị oke, ma ọ bụ ịchọpụta akụkọ mgbe ochie n'ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ elu, bụ ahụmịhe pụrụ iche ị ga - ahụ naanị n'akụkụ ụsọ mmiri nke Italytali, France, na England.
1. Obodo gbara osimiri okirikiri Mara Obodo Na Italy: Amalfi Coast
Ọmarịcha ụlọ ndị mara mma nke na-ele Osimiri Tyrrhenian nke obodo Amalfi bụ kaadị zuru oke. Ya mere, Amalfi dị n’elu obodo nile dị n’akụkụ osimiri Amalfi dịka obodo mara mma n’obodo intali. Na mgbakwunye, ị ga-ahụ na ọ bụ ndị kasị dreamy n'oge okpomọkụ njem na Europe. Nke a bụ ekele maka mmiri na-acha anụnụ anụnụ megide ọnụ ọnụ ugwu, na ụlọ ndị mara mma nke na-eme ka ọnọdụ zuru oke maka escapade n'akụkụ oké osimiri.
Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe, mgbe ahụ Amalfi Katidral na villa Rufolo, na-enye echiche dị egwu banyere Oke Osimiri Mediterenian na ogige. Otú ọ dị, ihe puru iche nke Amalfi bu 40 nkeji’ site na Vietri Sul Mare gaa ụfọdụ na Positano echiche kachasị mma nke ụsọ mmiri.
2. Obodo Kachasị Mma Obodo Obodo Na France: Saint-Malo
Mgbe Saint-Tropez na Nice nọ 2 nke obodo ndị ama ama dị na France, Saint-Malo na Brittany na ọwa bekee bụ ụsọ oké osimiri zoro ezo mkpuru. Nke a bụ ekele maka ọgaranya akụkọ ihe mere eme na akụkọ mere n’ụsọ osimiri Saint-Malo. Na Saint-Malo, ị ga-alaghachi azụ n'oge nke ndị ohi, na French corsairs, na-alụ ọgụ ma na-agbachitere Grand France site na mgbidi.
taa, Ogidi ndị dị na Saint-Malo dị ebube maka ịgagharị gburugburu obodo ochie, na-enwe mmasị n’ọdịda anyanwụ, na ikiri ebili mmiri. Iji nweta ekele zuru oke nke Saint-Malo, ị kwesịrị ịnọbọ chi ma gaa agwaetiti nke Grand Be na Petit Be forts.
3. Obodo gbara osimiri okirikiri mara mma na Europe: Lerici, Italy
Ọtụtụ ndị anụbeghị banyere obodo Lerici na Italian Riviera, otu n'ime ndị kasị mma mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe. Agbata obi ya La Spezia n'ọdụ ụgbọ mmiri obodo nwere ike ịbụ amalite njem gị na Cinque Terre, mana Lerici nwere anwansi ya nke ekpuchighi. Er ga-ahụ Lerici 8 kilomita ndịda ọwụwa anyanwụ nke La Spezia, na-ete ụlọ, uwe ojii, ọdụ ụgbọ mmiri, a na narị afọ iri na abụọ nnukwu ụlọ nke na-anọ n’oké osimiri, echiche dị ịtụnanya, na hiking ụzọ ụkwụ n'ụsọ oké osimiri.
Ọzọkwa, Lerici bụ ihe ndabere magburu onwe ya maka njem gị gaa n'ụsọ osimiri Italiantali: Ọmarịcha Cinque Terre, Portofino, na Portoverane. I nwekwara ike ime njem njem ụbọchị iji gaa ọmarịcha Pisa.
4. Obodo Obodo Mara Mma Na France: Cassis-Marseille
Nkume nzu, doro anya pristine mmiri, panoramic echiche nke n'ụsọ oké osimiri si n'akụkụ ụzọ cafes, mee Cassis ọmarịcha obodo dị n'ụsọ osimiri. Cassis dị n’agbata ugwu ugwu ndị kasị elu n’akụkụ mmiri na Europe, Cap Canaille, na okwute ọcha ọcha ọcha Calanques. Ọzọkwa, na Cassis, ị ga-ahụ ihe kachasị mma n'ụwa niile – Ubi vaịn Provence, na Oke Osimiri Mediterenian ahụ mara mma.
Sipping na otu iko mmanya Rose, n'ile ndi oku azu, ga-abụ ihe kachasị mkpa nke ezumike gị na obodo a nke nwere anwansi. Nke a French Zoro ezo mkpuru bụ a ụgbọ okporo ígwè si Marseille, na ezumike zuru oke site na obodo na-ekwo ekwo.
Paris na Marseilles nwere ụgbọ oloko
Marseilles na Paris na A Train
Marseilles na Clermont Ferrand Na Traingbọ oloko
Paris na La Rochelle Na-eji ụgbọ oloko
5. Arromanches-Les-Bains Na France
Amaara maka ọdịda nke Normandy, Arromanches bụ obodo mara mma dị n’akụkụ osimiri na mpaghara Normandy na France. N'adịghị ka ndị agha na ọ dịbu, taa ị ga - ahụ obodo mara mma dị na osimiri n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic.
Ya mere, ị nọ maka ezumike ị na-agaghị echefu echefu n'akụkụ oke osimiri, na ndakpu ala mmiri, yachting, gba ịnyịnya n'ụsọ osimiri ọlaedo, ma saa ahụ. Maka izu ụka dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo, oké osimiri ga-atọ gị ụtọ na Arromanches-Les-Bains’ 550 bi, ma nwee ahụ Anwansi Normandy.
Paris na Rouen Na A Train
Paris na Lille Na A Train
Rouen ka Brest Na ụgbọ oloko
Rouen gaa Le Havre Na ụgbọ oloko
Osisi dị n'akụkụ Cornes gbatịrị ruo 679 kilomita nke ọnụ ọnụ ugwu, abaitiat, na osimiri. Nke a na-agbakwunye na ọnọdụ Cornwall dị ka obodo kachasị mma na-egwu mmiri na UK. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye ihe omume egwuregwu mmiri na ezumike gị n'akụkụ oké osimiri, Cornwall zuru oke.
Obodo mara mma kachasị mma na Great Britain bụ ebe mara mma mara mma. Ya mere, ebe obula igbanwee, ị ga - ahụ onwe gị ka ị kwụ n’akụkụ oke osimiri dị ịtụnanya. Maka echiche kachasị mma maka oke osimiri na ọdụ ụgbọ mmiri Cornwall kachasị mma, ị nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ South West Coast.
7. Honfleur Coastal Town Na France
Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na France, mgbe ahụ Honfleur bụ azịza ya. N'ebe nzuko nke osimiri Seine na oke osimiri, osimiri cruises, yi ụlọ na-atụgharị uche na oké osimiri, ma jee ije n’akụkụ osimiri, mee Honfleur otu n'ime 10 kasị mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe.
Ọktọba bụ oge kachasị mma iji gaa na marina na ikuku ikuku dị mma na Honfleur. Ọ ga - abụ ụzọ dị mma iji sị ụgụrụ n’oge ọkọchị ma tinye anyanwụ ma zere iru mmiri, na ìgwè ndị njem nleta.
Rouen na Paris na A Train
Paris na Calais Na A Train
Rouen gaa Calais Na ụgbọ oloko
8. Santa Cesarea Okwu Italy
Santa Cesarea Terme bụ ihe magburu onwe ala gbara osimiri okirikiri obodo na Puglia. Na-ele anya n'oké osimiri, ị ga-enweta ọmarịcha oke osimiri ahụ na baths bath na gị Italian ezumike.
N'adịghị ka obodo ndị ọzọ mara mma dị n'ụsọ oké osimiri na intali, Santa Cesarea na-iche site na ya Owuwu Islam. Nke a pụtara, ọcha ndị mara mma na ụlọ elu gbara obodo ahụ gburugburu, na anya mara mma nke ukwuu na-acha anụnụ anụnụ oké osimiri na mmiri. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta ọmarịcha obodo gbara osimiri okirikiri, ị nwere ike inwe obi ụtọ ịnọ na otu n'ime ọtụtụ ụlọ gbanwere-ụlọ oriri na nkwari akụ na obodo.
Naples gaa Brindisi Na ụgbọ oloko
Naples na Bari Na A Train
Bari na Fasano Na A Train
Naples na Fasano nwere ụgbọ oloko
9. Brugge (eji), Belgium
Obodo ochie nke Brugge bụ otu n'ime ihe kachasị maa mma ochie obodo emmepe na Europe. Brugge nwekwara aha ahụ dịka otu n'ime 10 kasị mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe. Rugdị n'ụsọ oké osimiri bụ ihe dị ịtụnanya n'anya, ya na canal ya, ụgbọ mmiri, na ọmarịcha ụlọ.
Na a mara mma n'ụsọ oké osimiri, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị eze Flemish họọrọ, Brugge dị ka ụlọ ha. Ya mere, ị kwesịrị ị na-akwadebe maka ndị kasị ibu ọnụ ọgụgụ nke ụlọ na ụlọ elu na-ele oké osimiri.
The ọmarịcha obodo Venice closes anyị 10 kasị mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe ndepụta. Ihe owuwu, gelato, na ụgbọ mmiri agafe ka Venice bụrụ onye oké nrọ na-aga site na oké osimiri.
Venice bi n'oké osimiri, ọ bụ ya mere o ji bụrụ obodo kachasị n'ụsọ osimiri na Europe niile. Ndị adtali na-asọpụrụ Venice, na ndị njem na-asọpụrụ ya. Ga-enwe oge ịtụnanya na-awagharị n'okporo ụzọ na warara n'okporo ụzọ.
Ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka Akpara njem gị na "10 Kasị Mma Coastal Towns In Europe".
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Mma Coastal Towns In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
ukechukwujikokechukwu agbamgbam mara mma Obodo gbara osimiri okirikiri frenchriviera Osimiri ejegharị